Nhau - Maitiro ekuchengetedza kureba - kureba kwesevhisi bulldozer accessories matipi
Kuuya kwemabuldozer kwakatibatsira kugadzirisa dambudziko rekuchera ivhu nematombo.Asi mabhururu haazoshandiswi kwenguva yakati nekuda kwekuchinja kwemwaka.Asi kuti zvisakanganisa kushandiswa kunotevera, kudiwa kwekugara uchichengetedza zvikamu zveshandong. Unoziva here kuchengetedza iyo isina kushandiswa chikamu chebulldozer
1. Kugadzirira usati wapaka.
Chenesa zvikamu zvese zvebulldozer accessories, wozoisa muchina mukamuri yakaoma, kwete kunze.
Kana zvichidikanwa, kana ukaiswa kunze, sarudza pasi rakatsetseka, rakafukidzwa nehuni.Mushure mekupaka, unofanira kuifukidza nemucheka.Ita basa rekugadzirisa rakadai semafuta, mafuta uye kuchinja kwemafuta.
Zvikamu zviri pachena zve hydraulic cylinder piston rod uye gwara rekugadzirisa vhiri richaputirwa nebhotela.Kune bhatiri, bvisa "negative" uye uvhare bhatiri, kana kuibvisa kubva mumotokari uye uichengete zvakasiyana.Kana mvura inotonhora iri iyo. isingabudiswe kana tembiricha iri pasi pe 0 ℃, antifreeze inofanira kuwedzerwa kumvura inotonhorera.
2. Kuchengeta paunenge uchipaka.
Munguva yekupaka, bulldozer inotangwa kamwe chete pamwedzi kutyaira chinhambwe chipfupi kuitira kumisikidza firimu remafuta pachikamu chekuzora chechikamu chega chega uye kudzivirira zvikamu kubva kuita ngura.Paunenge uchishanda chigadziro chekushanda, bvisa girisi yakavharwa papiston tsvimbo ye hydraulic cylinder, uye wozoisa girisi mushure mekushanda.Kuchaja bhatiri, mucheki anofanira kuvharwa paunenge uchichaja.
3. Teerera mushure mekupaka.
Mushure mekuvhara kwenguva refu, kana panguva yekuvhara kwekupera kwemwedzi wega wega nekuda kwekushanda kwe-anti-rust, usati washandisa, bulldozer accessories inofanira kurapwa sezvinotevera: vhura pani yemafuta uye bhokisi rimwe nerimwe plug yemafuta, bvisa mvura yakasanganiswa.Bvisa musoro wecylinder, zadza vharuvhu yemhepo uye ruoko rwe rocker nemafuta, nzwisisa mamiriro ekushanda evhavha yemhepo, kana paine abnormality, Dozer inoiswa muvacuum state isina jekiseni redhiziri, uye dozer inotenderedzwa neanotangisa. .Nenzira iyi chete inogona kutanga dozer.
Nguva yekutumira: Nov-07-2021
Rubber Track Rollers, Bearing Track Roller, High Simba Bolt, Excavator Undercarriage Wear, Excavator Bucket Kucheka Kumucheto, Excavator Bucket Wear Parts,